﻿ ओलीको उपचार खर्च दैनिक २० लाख ! काँग्रेस नेताले मागे आम्दानीको स्रोत
ओलीको उपचार खर्च दैनिक २० लाख ! काँग्रेस नेताले मागे आम्दानीको स्रोत
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दैनिक २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर आफ्नो उपचार गरेको बताएपछि नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवम् पूर्वसांसद रामहरि खतिवडाले उनको उपचार खर्चको विवरण मागेका छन् ।
युट्युब च्यानल ‘सुत्र टिभी’सँगको अन्तर्वार्तामा युवा नेता खतिवडाले प्रधानमन्त्री ओलीको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन् ।
‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी सिंगापुरमा दिनको वीस लाख रुपियाँ खर्च गरेर मिर्गौलाको उपचार गर्नुभएको छ’, खतिवडाले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको तलब कति छ ? उहाँले दैनिक वीस लाख खर्च गर्ने क्षमता राख्नु हुन्छ ?’
यस्तै खतिवडाले प्रधानमन्त्री ओलीको मासिक तलम डेढ लाख भएको बताउँदै दैनिक २० लाख खर्च गर्न कसरी पुग्यो भन्ने कुरालाई जोड दिएका छन् । खतिवडाले उपचारका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले झापा र बालकोटको जग्गा बिक्री गर्नु भएको छ त ? भन्ने प्रश्न समेत गरेका छन् ।
‘सरकारले पारदर्शी रुपमा यसलाई जनताको बीचमा प्रधानमन्त्रीको उपचारमा यति खर्च भयो वा फलनाले गर्नुभयो । मैले यति गरे भन्नु पर्यो’, उनले भने, ‘जनताले खर्चको विवरण जान्न चाहेका छन् । पारदर्शी कुरा भन्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशमा हुने आफ्नो उपचार खर्च नलिने घोषणा गरेका थिए । सिंगापुरमा मिर्गौलाको उपचार खर्च महँगो पर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली शुक्रबार स्वदेश फर्किने तयारी गरिरहेका बेला नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवम् पूर्वसांसद खतिवडाले सिंगापुरको उपचार खर्च माग गरेर तरंग ल्याइदिएका छन् ।